Vaovao - Fahalalana amin'ny fanaraha-maso tombo-kase fingotra
Fahalalana ny fanaraha-maso tombo-kase fingotra
Fahalalana momba ny fanaraha-maso ny tombo-kase
1. Inona avy ireo entana fanaraha-maso ny tombo-kase vita amin'ny fingotra?
1) Hamarino raha madio ny vokatra.
2) Hamarino raha misy kilema ve ny vakoka;
3) Hamarino raha toa ka misy vokatra tsy fetezana / sisiny ny vokatra;
4) Hamarino raha misy kilema ny vokatra;
5) Hamarino raha misy kilema manapaka ny vokatra;
6) Hamarino raha misy mangatsiaka, simba ary kilema hafa ny vokatra.
2. Inona avy ireo toetra mampiavaka ny vokatra tombo-kase?
1) fahalotoana: ireo izay tsy mifangaro amin'ny fitambarana dia mampiseho loko isan-karazany na raharaha vahiny miharihary amin'ny vokatra;
2) Vaky: misy triatra miharihary amin'ny faritra anatiny sy ivelany na faritra hafa amin'ny vokatra;
3) Degumming: ny fitambaran'ny vokatra dia misaraka amin'ny taolana ary tsy afaka mifamatotra;
4) Tsy fahampian'ny fitaovana: tsy misy contour miharihary ny vokatra na ny faritra sasany tsy misy tsindrona lakaoly na tsindrona lakaoly tsy ampy na lakaoly miharihary mikoriana;
5) Bubble: ny velaran'ny vokatra dia miharihary fa miforitra sy boribory;
6) Marika mikoriana: misy tsipika miharihary eo ambonin'ny faran'ny vokatra, ary mamirapiratra sy mitanjozotra ny velarana;
7) maloto ny bobongolo: ny tampon'ny vokatra dia miharihary fa tsy malama tsara;
8) Marika bobongolo: amin'ny dingan'ny fanaovana na fampiasana ny lasitra, ny faran'ny concave na ny convex amin'ny faritra mifanentana amin'ny vokatra dia vokatry ny fipoahana sy ny fikororohana ny lavaka bobongolo (ny lesoka amin'ny vokatra miaraka amin'ny lavaka famolavolana mitovy dia mitovy);
9) Scald: fahamaizana miharihary eo ambonin'ny vokatra;
10) fanamboarana: ny nify bokotra dia mipoitra amin'ny ampahany manety, izay hanimba ny koloidin'ny vokatra ihany;
11) Unilateral: ny faritra simetrika dia mirona, miaraka amin'ny maro na kely amin'ny lafiny iray, na miaraka na tsy misy amin'ny lafiny iray. Ohatra, lehibe ny sakan'ny lafiny iray ary kely ny lafiny iray, ary tsy mitovy ny hatevin'ny rindrina;
12) Fiara vaky: misy marika manapaka mazava eo amin'ny tampon'ny fanapahana na tsy mitera-dalàna sy miforitra ny sisin'ny fanapahana;
13) lakaoly mihoa-pefy: ho an'ny ampahany amin'ny vokatra misy taolana misarona, ny faritra miharihary dia hosaronan'ny lakaoly;
14) Variegation: maloto tsy mitovy amin'ny lokon'ny fitambaran'ny vokatra noho ny fitambarana, bobongolo, sns;
15) Coil: misy peratra tariby eo ambonin'ny vokatra;
16) kilema mangatsiaka: voakiky na vaky ny vokatra noho ny fahatapahana mamirifiry.
3. Inona avy ireo lesoka amin'ny vokatra?
1) kilemaina mahafaty (a): tsy azo ampiasaina sy esorina ny vokatra;
2) lesoka lehibe (b): mihena be ny azo ampiharina ny vokatra, tsy azo ampiasaina ny vokatra, ary esorina ny vokatra;
3) Kilema maivana (c): mihena ny azo ampiharina amin'ny vokatra, saingy tsy voakasik'izany ny fampiasana azy, ary azo ekena ny vokatra;
4) Kilasin'ny mikraoba (d): tsy misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny vokatra azo ampiasaina. Izy io dia kilemaina vokatry ny famokarana ratsy ary azo ampiasaina.
4. Inona avy ireo mason-tsivana hitsarana ny lesoka hita maso?
1) Amin'ny toe-javatra mahazatra, ny fenitry ny famehezana ny fetran'ny fisehoana no harahina;
2) Ny vokatra dia tsy mahazo manana degumming, triatra ary kilema mavesatra hafa;
3) Ny fahalotoana, ny triatra, ny fikororohana, ny tsy fahampian'ny fitaovana, ny bubble ary ny manjary miboiboika dia tsy avela amin'ny tarehy miasa, ary tsy misy mihoatra ny 2 bobongolo bobongolo, marika mikoriana ary toerana misy convex mivelatra latsaky ny 2mm 2 amin'ilay tarehy tsy miasa;
4) Tsy misy lesoka avela amin'ny tarehy miasa, ny molotry ny tombo-kase diloilo anatiny sy ivelany dia ho maranitra, ary tsy avela ny tsipika axial eo amin'ny ivelany sy ivelany;
5) peratra mahitsizoro, tampon'ny fanapahana dia tokony ho fisaka, tsy misy burr.